बिड फुक्लेर खिया लागेको बारीको कुटो जस्तो
खाना पकिसकेपछी भुसे चुल्होमा रहेको ढुटो जस्तो
तिमी बिनाको जीवन लाग्दैछ
बलिसकेर फिल्टरनेर पुगेको चुरोटको ठुटो जस्तो
पहिले आकाश उज्यालो थियो घाम पनि लागेको थियो तिमी पनि त खुशी थियौ नि
अचेल आकाश किन कालो छ? शायद रुन खोजेको होला तिमी पनि त उदास-उदास छौ नि
तिमी पनि रोइदेउ न बरु आकाश जस्तै दु:खका सबै तुशहरु मेटिएर जाओस त्यो बर्शेको पानीले जस्तै फोहोर-मैला सबै बगाएर लैजाओस
होइन रहेछ यो कालो आकाश त धुवाले पो रहेछ घाम त लागिराखेकै रहेछ तिमी त सदा रोइ नै रहेकी रहेछौ मात्र मैले नदेखेको रहेछु
मेरो आँखा वरीपरी त धुवै-धुवा रहेछ
यो धुवा के को हो त? टायरको?सन्क्रमणको?डरको?बिखन्डनको?निराशाको?
तर म अझै पनि आशामा छु बादल चिर्दै घामको किरण आउनेछ त्यो किरणले हाम्रो वरीपरीको धुवालाई उडाउनेछ फेरि तिम्रो अनुहारमा त्यो मुस्कान छाउनेछ
ओहो कहाँबाट प्याजको कुरो आयो भन्नुहोला। भैरब अर्यालले आलुको बारेमा लेखे उनी चर्चित भए। म पनि चर्चित भाईहल्छु कि। हुन त प्याजको बारेमा लेख्ने म नै पहिलो कहाँ हुँ र? शंकर लामिछनेले Abstract चिन्तन प्याज लेखे, उनले मदन पुरस्कार पनि पाए। यसो हेर्दा लाग्छ म मा पनि चर्चा पाउने भूत पो चलेको हो कि।
भैरब अर्यालले जब आलु लेखे तेतिखेरका बाहुनहरु लसुन र प्याज खाँदैनथे। उनले जताजतै आलु खाए, तेसैले आलुको बारेमा लेखे होलान। यहाँ बाहुन शब्द कुनै जाती बिशेष भएर लेखिएको होइन है, फेरी यसको प्रतिकृयामा पनि टायर बल्ला नि। अहिले हाम्रो परीकारमा आलु होला नहोला, तर लसुन र प्याज चै अवस्य हुन्छ नै। भनेपछी मैले खानेकुराको बारेमा लेख्नु मेरो पनि धर्म हो नि।
प्याज आँफैमा तरकारी त होइन, यसलाई तरकारीको स्वाद राम्रो बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तेसो त प्याजको तरकारी पनि त खाइन्छ नि आलुसँग मिसाएर। अचेल त हरियो प्याज पनि पाईन्छ नि तरकारीको रुपमा। अझ मासुमा त प्याज नहालिकन स्वाद नै आउन्न भन्छन खानाको पारखीहरु। अर्को कुरा यसलाई सलादको रुपमा काचै पनि खान सकिन्छ। तपाईं burgerर sandwich खानुहुन्छ भने तेसमा पनि प्याज त राखेकै हुन्…